Lapho ngiqala ukuhlangana isoka lami, Christopher, Eminyakeni emihlanu edlule, Kwadingeka eyodwa kuphela izicathulo flat - amabhuzu scuffed ekolishi. Uma ngicabanga isipiliyoni sami undergraduate, Angethembi ngisho babegqoka kubo 10 izikhathi, njengoba High Heels kuyiswe kakhulu ngohambo lwami futhi kusukela ekilasini ngaphandle ngamasentimitha of ice camera the campus, okuyilapho Ngathembela uqhekeko. Alright, I Wagcwalisa leli yokugcina (Kuthi.) Intombazane Girly ngazo zonke izindlela, Bengingazi kanjani ukwenza sweatpants pretty noma uzizwe ukhululekile ezibonisa ubuso bami ngaphandle buso makeup, futhi angizange wasibona kusengaphambili lesi ukushintsha. Kodwa wenza, futhi ngiyethemba kuba nabanye besifazane, kanjalo.
Not ukuthi kukhona yini okungalungile ngokuxoxa makeup and Stilettos - azijabulele! Vele musa ancike kuzo. Lapho ngibuka omagazini ithala njalo abezindaba esisiphahlileko, Anginayo ukuzibuza ukuthi kungani abesifazane abaningi kangaka emhlabathini esintengayo emnyangweni ukuzethemba. Ngingakubonisa izifundo ezilandelayo engikufunde nabangane bami Elisengozini futhi indoda iqonde-sokudubula ekuphileni kwami:
1. Yamukela mshini wakho ngabanye: Ngesinye izinsuku yami yokuqala ehlobo Chris, Ngafikelwa ingebhe mayelana nendlela eliphaphathekile ngibukeka futhi yakhetha ukuba self-umshuki. Lapho ngithi Ngikhathazekile eliphaphathekile, I mean Ngikhathazekile alabhaste akhelene ayevumela, ngakho lokhu ezisheshayo zokuxazulula izinkinga kwaholela lutho kodwa streaks of orange nokuzisola. Lapho (azi) zakungabaza uma ngifuna wagqoka self-umshuki, I weza ahlanzekile (nakuba hhayi ngomqondo ongokoqobo, njengoba okwakuhilela ngesonto of eliphathisa.) Wangibuza ukuthi kungani ngingalishayeli ukwenza lokho ngokucabangela ngaba amahle ezingavamile isikhumba tone. Ngizobe azikaze zimuzwe umuntu ubheke isikhumba sami ngaleyo ndlela, futhi ngazizwa silly ngokuzama ukushintsha into eyingqayizivele nge umkhiqizo unuka metallic futhi washiya amaphijama zami futhi izingubo ezimhlophe muddied.
Abalingani bethu bafuna ukuba sibheke njengathi, futhi kufanele ufune, kanjalo. Uyafana kokuba ukuphola Isithombe sephrofayela kubukeka lutho abafana nawe, photoshopped esidlule iphuzu ukuqashelwa. Sonke unique, futhi lezo zinto zisenza sehluke futhi asenze sishiye ukugqama esixukwini. Thola ukuqiniseka ukukhombisa mshini wakho wangempela futhi Ungahahi abanye '.
Njengoba for cats, okufanayo siyiqiniso. A Calico is engasekho kahle kwaphawula esingaphezu tabby - kungcono konke iso esikhundleni salokho okufanele likubone.
2. Ingabe not shame umzimba: Two of cats zami zincane, ezimbili kukhona emncane isilinganiso, futhi ezimbili ezinkulu. Abazi lokhu. cat yami enkulu Ugxumela phezu namakati uhhafu ubukhulu bakhe futhi uyazibuza ukuthi kungani kunjalo ingajabule wrestling play date. Uma abesifazane kuphela ongamisa umzimba-bashing sobabili ububi futhi emangalisayo lula. Sivela kuzo zonke izinhlobo ezihlukahlukene futhi ayilingani, nokho Ngizwa abantu abaningi kangaka labangane bami kuzo mayelana beqonda emzimbeni ukushiyeka kwethu okungathí. Lezi Imibono ke kuhambisana ukwesaba mayelana nendlela amadoda ababheka imizimba yabo uma kuqhathaniswa onobuhle kaVictoria Secret. Lolo hlobo of self-inkulumo kuholela ngokuvamile senza ngemizimba yethu siqu, hhayi nje, kodwa imizimba bebonke. I cringe lapho ngizwa izingcaphuno like, "Abesifazane Real kukhona curvy." Akubona abesifazane abahle beze array amajamo, ngakho ake emukele inkholo whatever sibalo ubona nathi ifomu lethu abaphile. Abesilisa ungafuni ukuzwa kithi ngiwahlanganise imizimba yethu, futhi thina sonke-too-ngokuvamile wazibeka izimo lapho bengakwazi ukunqoba, kungakhathaliseki izimpendulo zabo. Kate Upton, Kate Winslet, futhi Kate Moss zihlukile konke yakhela, kodwa bonke yonke uthathwa enhle?
Ngokuba isikhathi eside kunazo, Angikwazanga ukuma ukuthi imilenze yami awunamatheli-mncane, ngakho ngeso lengqondo indlela engamangala ngayo lapho uChris wangitshela ukuthi yena wasithanda imilenze yami watusa ukuba ngiye kuyi izikhindi more and iziketi. Umuntu kwesokudla uya bathanda umzimba wakho hhayi bophezela you ushintshe it. Ngaso sonke isikhathi khumbula ukuthi.
3. Jabulela ukudla: Ah, injabulo awukudla. Lapho ngizamazamise ukuthi isikhwama nokuyenga, zonke eziyisithupha cats yami ukukhokhisa phambili ezinyaweni zami. Bathanda ukudla kuze kube seqophelweni lokuba kungcono umcimbi. Ubani ongabasola? Like abesifazane abaningi kangaka, I walwa ngekudla ngihlupheke umzimba ihlazo ngenhla waphawula of bengazizwa svelte ngokuphelele a bikini. I nesisindo esingamakhilogremu amahlanu manje kunangesikhathi mina Chris lokuqala aba nomhlangano, kodwa exchange for ukuthi, Ngabelane inkatho pizza naye phakathi ngoLwesihlanu ebusuku TV binges. Bengingeke ukudayisa labo iyiphi inombolo esikalini. Ngingumfana okungaphezulu ukhululekile ngomzimba wami ngesikhathi 31 kunami kunangaphambili ebusheni bami.
Ukudla okunempilo kuyinto emangalisayo, futhi Ngingumfana yayikholelwa ngokuqinile ukunakekela ngawe (bona ngezansi.) Ukujabulela wokuphila futhi bonke flavour yayo, noma, kuyinto pretty enkulu, kanjalo. Musa bagxila kakhulu ikhalori izinga lakho lokuphuza ukuthi ulahlekelwa ithrekhi lokujabulela sakusihlwa - ingxoxo obuhambisana it.
4. Zinakekele: Lapho cats yami bakhathele, balala. (Uqamba konke ngokuphelele selikhathele, konje.) Lapho enye cat kuyabacasula nabo noma kuhlasela isikhala esiqokiwe, abasenakuphumula ukwenqena e nokuveza kwenyanya. Ngakho ngokuvamile, sigcizelela phezu ukukhuluma izingqondo zethu, noma sivumela othile basiphatha ngendlela ukuthi sasingeke aphathe omunye umuntu. Cats, ngoba indaba namadoda, uthambekele ikhwelo futhi uthole phezu nge, Ngaleyo ndlela ezihambayo nokuphila kwabo hhayi ukuhlala sicasukile noma ukubaba. Ngokuvamile musa ukuthatha izinto njengokungathi zihloselwe ukukucasula, futhi bayazi ukuthi kungcono imizwa yakho eqiniso abonisa kunokuba baqhubeke isenzo nishaye kamuva.
Ukwethembeka kubalulekile ebuhlotsheni, futhi umlingani ilungelo uyokuthanda ngisho nalapho uku ngaphansi kuka Loveable ezweni elingaphandle. Uma ungeke ukwazi basho ukuthi yini ngempela ofuna, pho ngeke umlingani wakho akuphe yona?
Lena onjalo kanzima, ikakhulukazi labo phakathi kwethu abanesimo balwele agreeableness. Uma kunguwe usizo, Zama ukucabanga ngezinto unjalo, izwi nezwi izinto ngendlela bewungeke zicasulwe uma kuthiwa kuwe. Ngaleyondlela, oyishoyo ukuthi ucabangani ngaphandle kokuba siphelelwe ubuthongo udaba. The more nenza lokhu, the ngokwemvelo more it kini. In ikhaya lami, encimfelwayo and purring kokubili imisindo ezivamile, futhi bobabili kubonisa uhlobo lwenhlonipho: abanye futhi ngokwethu.
5. Exist in the mzuzu: Ngihlale bamangele amakati zami izinyoni ngokugxila uyofana nendlela uChris udlala isiqophi imidlalo. Isisho sakudala uyeke ukuba iphunga roses idume isizathu - okuyinto fikisa me sekela High Heels.
Upholishi iqoqo My omdala ezinye imibala langa and strappy ukulandisa okuhlotshisiwe nokusontiwe, Mina Asekhona impela ngababili ambalwa elinde ekamelweni lami for the ngubo ilungelo, noma okungenani lolu vortex polar to lose engachazeki. Lapho mina no Chris waqhubeka lohambo lwethu lokuqala ndawonye Las Vegas, I phama amahlanu ngababili, zokucabanga sequins engapheli nezimpaphe (ngokusobala, ikhanda, Vegas kwakusho ukugqoka like a showgirl.) Bangaki kulabo ngababili Ngangingazi bagcina egqoke? Zero. Kunalokho, Target my izimbadada bashaya strip zikakhonkolo sonto, futhi ngikhumbula ngizizwa ngakho Ngambonga babacela. Amantombazane ezingenakubalwa washikashikeka esinabo platform izicathulo, nezilima by ukulunguza-toe sokuhlushwa. Ngangifuna ngempela ukuba banikele ebhentshini ezinye band-aids, Ukwazi ukuthi eko zami ekuseni self ngabe balwisana eceleni kwabo.
Cats My akasoze uphuthelwe squirrel-ukubukela ukuze nje babekwazi bushelelezi uboya emuva endaweni, futhi angikaze wayengase ihlale nge Chris kwadingeka I izimbadada bakhathale nge 4 ye-intshi lift. Izikhathi, amaholide umhlabeleli bathembele ezinengqondo nezicathulo futhi ngichitha amahora ukwenza lutho ngempela.
Ukuphila imayelana okhulayo, kanye nobudlelwano engasisiza kangcono ukuzazi thina ngokwethu njengoba sikhubeka futhi siphumelele. Ngokufanayo, ubudlelwano bangazuza ukuzethemba, ukwethembeka elibhekele, nolokuzitika ezinye awukudla manje bese. Sethemba, sithola ukulingana ezinhle yenza nomsinjwana othile futhi (esikhatsini lesinyenti) purrs endleleni.
Ingabe uzizwa ukuba umuntu abangabodwa abaphumelelayo kanjani? We possess izici ezivamile fun, angesabi futhi kuqiniswa ...